Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa radar roob? Saadaasha Shabakadda
Saadaasha hawada iyo saadaasha cimilada, waa lagama maarmaan in la ogaado roobabka da'aya ee ka dhici doona aag gaar ah waqti hore si markaa, haddii loo baahdo, loo qaado tallaabooyin ka hortag ah oo lagu jiro xaalad khatar ah. Si tan loo sameeyo, waxaa jira aalado tilmaami kara isla markaana si joogto ah ula socon kara roobka ka da'aya meel cayiman. Waxaa loo yaqaan radar roob.
Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeeyaan iyo sida loogu isticmaalo saadaalinta roobka?
1 Radaar Roob
2 Walxaha radar
3.1 Aasaaska aragtida ee radar
3.2 Qalooca dhulka
4 Fasiraadda sawirada radar
Kuwa aan weli garanayn, ereyga radar wuxuu ka yimid ereyga loo soo gaabiyo Ingiriisiga ogaanshaha raadiyaha iyo kala duwan. Tani waxay u taagan tahay "ogaanshaha iyo cabirka fogaanta raadiyaha." Radaarku wuxuu ku yaalaa meelo badan, sida kamaradaha xawaaraha. Saadaasha hawada, noocyada kala duwan ee raadaarka waxaa loo adeegsadaa in lagula socdo xaalada lakabyada sare ee jawiga iyo ogow isbeddelka nidaamyada cimilada.
Rada waxay isticmaashaa nidaam mowjado elektromagnetic ah si ay u cabirto masaafada, jihooyinka, joogga sare iyo xawaaraha walxaha, kuwa taagan iyo kuwa dhaqaaqaba. Sidan oo kale, waxay awood u leeyihiin inay la socdaan gawaarida, diyaaradaha, maraakiibta, iwm. Xaaladdan oo kale, waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo qaab-dhismeedka saadaasha hawada oo ay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa daruuraha.
Hawlgalkeedu waa mid fudud. Waxay abuuraan garaaca raadiyaha tanina waxay ka muuqataa bartilmaameedka, iyadoo laga helayo isla booska emitter-ka. Tan waa ku mahadsan tahay waxaad ka heli kartaa macluumaad badan oo ku saabsan goobta daruuraha, cufnaanta iyo qaabka, haddii ay korayaan, haddii ay keenayaan nooc ka mid ah roobab, iwm.
Dhammaan raadaarradu waxay u baahan yihiin dhowr nooc oo canaasiir ah si hawlgalkoodu u noqdo mid sax ah. Isticmaalka hirarka elektromagnetic-ka ah ee raadaarradu diraan waxay u oggolaaneysaa in lagu arko walxaha meelaha fogfog. Inta ugu fiican oo dhan, maahan oo keliya inaad ogaan kartid meesha daruuraha ku dhex jiraan qaybta iftiinka la arki karo, laakiin sidoo kale waxay ku siisaa macluumaad ku jira dhawaaqa.
Qaybaha ugu muhiimsan ee shucaacdu ugu baahan yihiin hawlgalkooda waa:
Soo gudbiyaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro calaamadaha soo noqnoqda sare ee goor dambe la soo diri doono.
Anteeno Anteenadu waxay mas'uul ka tahay dirista iyo helitaanka astaamahaas soo noqnoqda ee sarreeya oo bixin doona macluumaad ku saabsan booska daruuraha.
Qaataha Qalabkan waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado laguna ballaariyo calaamadaha anteenadu soo qaadatay si ay u akhrin karto.
Nidaam taas oo u oggolaanaysa in la muujiyo natiijooyinka laga helay cabbiraadaha.
Doppler radar waa nidaam awood u leh inuu ku cabbiro doorsoomayaal fara badan isla shayga. Waxay awood u leedahay inay bixiso macluumaad ku saabsan koorsada, masaafada iyo dhererka sheyga, marka lagu daro in la ogaan karo ilaa xawaareheeda. Raadaarka noocan ah, khubarada saadaasha hawadu waxay awoodaan inay ogaadaan dhaqdhaqaaqa daruurta oo ay sidaas ku ogaadaan koorsada ay leedahay, qaabkeeda iyo suurtagalnimada inay keento roobab.
Radar Doppler radar wuxuu ku saleysan yahay soo saarista seddex xabbo oo ku soo noqnoqda jeer, iyo, iyadoo la adeegsanayo saameynta Doppler, xawaaraha isdabajoogga ah ee sheygaas in la cabbiro ayaa la ogaan karaa. Maaddaama noocyada shucaacyadu aysan si fiican u cabirayn masaafada, iyagu faa'iido badan uma leh inay ogaadaan goobta saxda ah ee shayga.
Aasaaska aragtida ee radar
Si sax ah loo fahmo hawlgalka radar roobab waa lagama maarmaan in la ogaado aasaaska aragtida. Raadiyayaashani waxay u dhaqmaan sida ay u dhaqaaqayaan walxaha marka loo eego raadaarka qaybta ku toosan dhinaca iftiinka. Dhaqdhaqaaqani wuxuu soo saaraa isbeddel ku yimaada inta jeer ee mawjadda elektromagnetic-ka ee ay soo saaraan marka iftiinka ku soo dego. Taasi waa, marka iftiinka qoraxda uu ku soo dhaco shayga la baranayo, inta jeer ee mawjadda elektromagnetic-ka ee ay soo saareyso way kala duwan tahay. Kala duwanaanshahan, radar wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado booska, cinwaanka iyo xawaaraha sheyga, xaaladdan oo kale, daruur.
Markay daruurtu ku soo dhowaato raadaarka waxay si togan u saamaysaa inta jeer ee hirarkii hore loo sii daayay. Taas bedelkeeda, markii shay ka fogaado raadaarka, wuxuu leeyahay saameyn taban. Farqiga u dhexeeya inta jeer ee la sii daayay iyo kuwa la helay ayaa ah kuwa ogolaanaya xisaabinta xawaaraha uu sheygu ku socdo.
Xaqiiqdii waad ka fikirtay sida ay u awoodo inay ku cabirto xaaladda walxaha masaafo dheer haddii dhulku yahay mid wareegsan oo aan fidsanayn. Walxaha aad u fog waxaa "garaacaa" qallooca dhulka. Si loo go'aamiyo joogga sheyga, qallooca dhulka waa in lagu xisaabtamo. Waxyaabaha ka sii fog ee ku dhow dhulka laguma arki karo raadaarka noocan ah, maadaama ay ka hooseeyaan dusha sare.
Waxa ugu waxtar badan ee ku saabsan radar-kan ayaa ah inaad heli karto macluumaadka waqtiga dhabta ah ee cimilada. Taasi waa, waad ogaan kartaa xaalada jawiga markasta si aad u saadaaliso xoojinta roobka, jiritaanka roobdhagaxyaalaha, qaska, duufaanada, jihada iyo awooda dabaysha, iwm.
Fasiraadda sawirada radar
Marka cabbiraadaha lagu sameeyo radar-roobka, sawirrada waxaa lagu helaa dhammaan macluumaadka la helay. Sawirada waa in si sax ah loogu turjumaa saadaasheeda xigta. Sawiradu waxay leeyihiin halyeeyo dhinacyadooda midig oo tilmaamaya qiimaha midabka oo ku saleysan milicsiga biyaha ee soo dadajin kara.
Waxay kuxirantahay nooca daruuraha ee cirka jooga, mid ama midabbo kale ayaa lagu arki karaa sawirka:
Daruuraha Stratocumulus. Daruurahaasi waxay ka kooban yihiin dhibco biyo ah gebi ahaanba. Dhibcaha biyuhu aad bay u yar yihiin cabbirkooda, sidaas darteed waxay bixiyaan calaamado aad u hooseeya.
Altocumulus. Daruurahan dhex-dhexaadka ah waxay leeyihiin heer qabow, oo ku filan, in badanaaba ay ka kooban yihiin kristantar baraf ah iyo dhibco biyo aad u qaboojiyey. Kiristaalo baraf ah ayaa calaamadaha radar-ka sii ballaaranaya.
Roob. Marka roob la filayo waa sababta oo ah roobabka shucaaca roobka waxaa suurtagal ah in la ilaaliyo sida kareemada barafka ee jawiga u koraan ilaa ay u dhacaan. Iftiiminta Radarka ayaa sii kordheysa iyadoo kristantariyada barafka ay ku dhalaalaan biyaha maxaa yeelay joogtada korantada ee biyaha dareeraha ah ayaa ka weyn tan barafka.
Stratocumulus leh qulqulo yaryar. Daruurahaan waa la arki karaa haddii dhuumanka dhererkiisu yahay boqolaal mitir oo dhumuc ah. Markay taasi dhacdo, qulqulatooyin yaryar ayaa la soo saaraa oo kori kara haddii xasillooni darrada ku sii socoto.
Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka Waxay leedahay radar roob-ilaalin ah oo kormeera xaaladda jawiga maalin iyo habeenba. Waxay bixisaa macluumaad ku saabsan daruuraha, jihooyinka, xawaaraha, iyo jooggooda. Thanks to radar-kan, roobab ayaa la sii saadaalin karaa ilaa dhawr maalmood ka hor.
Halkan Waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto waqtiga dhabta ah sawirrada uu radar-ka AEMET uu innaga tusayo jasiiradda.
Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato sida shucaaca roobka u shaqeeyo iyo sida khubarada saadaasha hawadu ay ku ogaadaan jawiga jawiga si sax ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Raajada roobka
Maxaad u qaban kartaa dhulka?